Ny zipo Ballet TUTU dia afaka mampiseho ny fihetsiky ny mpandihy - Vaovao - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd.
Home > NEWS > Vaovaon'ny orinasa > Zipo Ballet TUTU dia afaka mampiseho ny fihetsiky ny mpandihy
Zipo Ballet TUTU dia afaka mampiseho ny fihetsiky ny mpandihy
Ballet Tutuzipo no zipo fandihizana malaza indrindra amin'ny ballet kilasika. Izy io dia mampiavaka azy amin'ny zipo fohy dia fohy, izay mivelatra avy amin'ny andilana mba ho mora ho an'ny mpijery mankasitraka ny fihetsiky ny mpandihy mahafinaritra sy ny volon-tongony mahafinaritra. Ao amin'ny tantara an-tsehatra amin'ny Lake, Tutu dia saika natosika tany an-tampony. Taty aoriana, rehefa niresaka momba ny ballet ny olona, ​​dia nasehon'izy ireo ho toy ny manao kiraro Tutu sy pointe ilay mpandihy, izay mampiseho ny fahombiazany.
Tutu dia vita amin'ny kofehy mafy, izay mizara ho Tutu ho an'ny fampiharana ary Tutu ho an'ny fampisehoana. Ny mahasamihafa azy roa dia ny isan'ny kofehy. Ny voalohany dia ampiasaina amin'ny fampiharana, noho izany ny kofehy ankapobeny dia tena kely ary ny faharoa kosa amin'ny ankapobeny dia mampiseho ny hakanton'ny vehivavy na ny fahasoavany, ary amin'ny ankapobeny dia mampiasa kofehy kofehy enina mihoatra ny enina, izay miseho ho sosona, fa tsy henjana toy ny Tutu.
Ho fanampin'izany, mazàna Tutu dia misy tampony mifanandrify aminy izay mifandray mivantana amin'ny Tutu, fa Tutu kosa matetika dia zipo fandihizana misaraka. Raha tsy misy ny tampony mifanentana dia azo ampifanarahana amin'ny akanjo fampiofanana ihany izy io. Raha ny Tutu sy ny pataloha. Miaraka na tsy misy pataloha (Tutu dia atin'akanjo mifangaro), noho ny akanjo fanatanjahan-tena mifanentana dia tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa, resaka safidin'ny tena manokana fotsiny.
Niorina tamin'ny taona 1999ï¼ŒWudongfang Culture Transmission Co., Ltd. izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana fitafiana dihy, ary manana ny lazany eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny dihy sinoa. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny tutu ballet, zipo fanaovana baleta, leotard fandihizana ary fitafiana hafa. Ary kiraro fandefasana balafomanga, fanamafisana balaonina ary kojakoja hafa.
Teo aloha:Fenitra akanjo Ballet tutu
Manaraka:Lazao aminao ny fiasan'ny akanjo miloka